Fanadihadiana iray Miresaka Ny Fiainan’ireo Adolantsento efa Reny ao Bolgaria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2017 3:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, русский, Ελληνικά, عربي, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Ny Fikambanana Bolgara momba ny fandrindràna fiainam-pianakaviana (BFPA), fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana, mikarakara ny fahasalamàna sy ny fanabeazana, no namoaka tao amin'ny Youtube ny fanadihadiana iray nahazo fankasitrahana, nampitondrainy ny lohateny hoe “Fa iza ireny reny ireny“, momba ny fiainan'ireo vehivavy dimy izay efa niteraka zaza iray fony izy ireo mbola tsy ampy taona.
Sarimihetsika novokarina tamin'ny 2011 ary maharitra telopolo minitra, amin'ny fiteny bolgara arahana teny anglisy mandady ery ambany mba hahafahana mandòna olona bebe kokoa. Izany eo ihany, fa olana manerantany ny fitondran'ireo adolantsento vohoka aloha loatra sy ny fampanambadiana ny ankizy.
Nambaran'ny BFPA fa tamim-pitiavana tokoa no nanoloran'ireo mpanatontosa azy ireo ilay lahatsary fanadihadiana mba ho afaka apetraka ao amin'ny Youtube. Ity ny famariparitana :
Io fanadihadiana io dia nahazo loka nandritry ny fetibe fahadimin'ireo sarimihetsika fanadihadiana “Roma Life-Central European Documentary Festival” tamin'ny Martsa 2012, ary nalefan'ny Tahirimbolan'ny Firenena Mikambana ho an'ny mponina (UNFPA) rehefa misy hetsika ataony.
Nanomboka teo ny mpamokatra azy, Irena Daskalova, dia namokatra sarimihetsika marobe, ary ny BFPA kosa manohy ireo hetsika fanabeazana momba ny fahasalamnana ara-pananahana sy ny zo amin'ny fiterahana.